नेपाल आज | अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प नर्थ कोरिया वा पाकिस्तानको जस्तो व्यवस्था हो : डा. सुरेन्द्र केसी (भिडियोसहित)
भिडियो इतिहास र अनुभूति राजनीति
आइतबार, ०३ कार्तिक २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौँ । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले मोहम्मद आफताफ आलमलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा भएको साक्षात्कारमा केसीले भने–‘ आलम ४ पटक मन्त्री भएको राजनीतिक पहुँचकै कारण हो ।’ लोकतन्त्रका नाममा आपराधिकरणलाई छुट दिन नहुने उनले बताए । उनले राजनीतिक व्यवस्थाकै कारण अपराधका घटना बढेपनि स्वार्थका लागि संरक्षणमा लागिएको आरोप लगाए ।
मोहम्मद आफताफ आलम ४ पटक मन्त्री हुनुभयो । निर्वाचित हुने तरिका त्यस्तो थियो । अनि आफू यसमा लाग्नुभयो । केसी भन्छन् –‘आफताफ केही वर्ष जेल जानुहुन्छ । पछि कांग्रेसले जित हासिल गर्छ अनि आफताफले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ । त्यसबेला कुनै कथा बुनिन्छ ।’
देउवाले नै फेरि जित्छन् । युवाहरुले प्रतिरोध गर्दा विकल्प निस्किन्छ । माधवकुमार नेपालले पनि राजीनामा दिए तर देउवा पार्टीले चुनाव हारेपनि चुप बसे । फेरि पनि उनी नै जित्नेछन् । उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि साथ छ । कांग्रेसका युवाहरुले कानुनीराजका आधारमा कारबाहीको कुरा ल्याउनुभएको छ । पार्टी सभापतिले राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् । यहाँ त्यो पनि सम्भावना छ ।’ उनको भनाइ थियो ।
‘कांग्रेसको पराजयपछि देउवा दण्डित हुनुपर्ने थियो । जसमा विश्वप्रकाश शर्मा लगायत थिए । ८ जनाले सामुहिक विज्ञप्ति आयो । पछि विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रवक्ता पद दिनासाथ यो समूह चुप बस्यो । ’ उनले बताए । उनले सर्बोच्च अदालतमा पनि राजनीतिकरण भएको भन्दै उनले भने–‘ सुशीला कार्कीलाई नै महाअभियोग, अर्का दीपकराज जोशीलाई लगाइयो । ‘यहाँ चरम राजनीति करण छ ।’
बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३८ क्विन्टल सुन लगायतका कुरा विस्तारै धुमिल हुने भन्दै उनले अर्काले निर्देशन दिएपछि मात्र हामी विधिको शासन पालनामा लाग्छौँ । उनले आग्रह गर्दै भने –‘यसरी देश बन्दैन । वास्तविकताको जगमा उभिएर स्वस्थ परम्परा बसालौँ । ’ केसीको अभिव्यक्तिका लागि हेर्नुहोस् भिडियो :
‘भ्याकेट’मा गएर पार्टी एकता भंग गर्न खोजेको नेता नेपालको आरोप